3rd Dose COVID-19 Vaccination FAQ - Pun Hlaing Hospitals
3rd Dose COVID-19 Vaccination FAQ
1. Who are eligible for Sinopharm 3rd Dose?
၁။ မည်သူတွေ Sinopharm ကာကွယ်ဆေး တတိယအကြိမ် ထိုးနှံနိုင်ပါသလဲ?
The best is to get your 3rd Dose between four months to six months after two doses. Under 18 years of age are not allowed for 3rd Dose. Under permission from Ministry of Health, Pregnant women and lactating mothers are allowed for 3rd Dose.
၂ ကြိမ်ထိုးပြီးနောက် ၄လ မှ ၆ လခြားလျှင် ထိုးနှံနိုင်ပါသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်များ ထိုးနှံခွင့်မပြုပါ။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် နှင့် နို့တိုက် မိခင်များ ထိုးနှံနိုင်ပါသည်။
2. Will PHH provideacertificate?
၂။ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရနိုင်ပါသလား?
PHH will provide certificates. For more details, please contact our call centre 01 23 99 222 between 8am to 5pm.
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာ ၀၁ ၂၃ ၉၉ ၂၂၂ သို့ မနက် ၈ နာရီမှ ၅နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
3. How much will 3rd Dose cost?
3rd Dose is available to purchase and register at Pun Hlaing Hospitals (Hlaing Tharyar, Mandalay, Taunggyi), Pun Hlaing Clinics (Taw Win, Thanlyin Star City), & Pun Hlaing COVID-19 Vaccine Centre (Hlaing Tharyar Dulwich), with MMK 35,000 (cash payment only). To purchase and register online, please visit [ https://www.punhlainghospitals.com/covid-19-vaccination/] and pay with WAVEPAY at MMK 35,000. You may also choose to pay with Kpay, CBpay2C2P (MPU, Visa) for online Vaccine voucher purchases with MMK 35,000 plusatransaction fee of MMK 1,600.
တတိယအကြိမ်ထိုးနှံရန် ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ (လှိုင်သာယာ၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး)၊ ပန်းလှိုင်ဆေးခန်း (တော်ဝင်၊ သန်လျင် ကြယ်စင်အိမ်ရာ)၊ နှင့် ပန်းလှိုင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစင်တာ (လှိုင်သာယာ Dulwich) တွင် သွားရောက်ဝယ်ယူ၍ ငွေသားဖြင့် ပေးချေသော် တစ်ကြိမ်စာအတွက် ဈေးနှုန်းမှာ မြန်မာကျပ် ၃၅,၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ ဝက်ဘ်ဆိုက် [ https://www.punhlainghospitals.com/covid-19-vaccination/] တွင် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဝယ်ယူရာတွင် Wavepay ဖြင့် ငွေပေးချေသော် မြန်မာကျပ် ၃၅,၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ 2C2P (MPU, Visa, Kpay, CBpay) တို့ဖြင့်ပေးချေသော် မြန်မာကျပ် ၃၅,၀၀၀ ကျပ် နှင့် အွန်လိုင်းမှလွှဲခ မြန်မာကျပ် ၁,၆၀၀ ဖြစ်ပါသည်။
4. How can we register for 3rd Dose?
၄။ မည်သို့ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသလဲ?
The booking vouchers are available to purchase and register at
Pun Hlaing Hospitals and Clinics (HTY, TWC, MDY, TGY, Thanlyin Star City)
Pun Hlaing COVID-19 Vaccine Centre (HTY Dulwich)
ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ ဝက်ဘ်ဆိုက် https://vaccination.punhlainghospitals.com/ မှတဆင့်ဝယ်ယူ၊ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ (လှိုင်သာယာ၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး)၊ ပန်းလှိုင်ဆေးခန်း (တော်ဝင်၊ သန်လျင် ကြယ်စင်အိမ်ရာ) နှင့် ပန်းလှိုင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစင်တာ (လှိုင်သာယာ Dulwich) တို့ရှိ အရောင်းကောင်တာများတွင် သွားရောက်ဝယ်ယူ၊ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
5.What type of COVID-19 Vaccine?
၅။ မည်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစား ထိုးပေးပါသလဲ?
The type of Vaccine is Sinopharm manufactured from the Beijing Institute of Biological Products (BIBP). MOH and FDA locally approve the Vaccines we are bringing into Myanmar.
WHO မှ EUL အဖြစ်ခွင့်ပြုထားသော Sinopharm (Beijing Institute of Biological Product) အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန (MOH) နှင့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) အသိအမှတ်ပြု ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လက်ရှိ တစ်ခုတည်းသော ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသည့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ ဖြစ်ပါသည်။
6. Are you allowed to replace the person for 3rd Dose? ?
၆။ တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးအတွက် အစားထိုး လူစားလဲခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား?
We allow replacing the person one time by calling our Call Centre 01 23 99 222 between 8am to 5pm with your Booking Code and personal details.
လူအစားထိုးရန် မိမိ၏ဘိုကင်ကုတ်နှင့်အတူ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာ ၀၁ ၂၃ ၉၉ ၂၂၂ သို့ မနက် ၈ နာရီမှ ၅နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်၍ တစ်ကြိမ်သာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
7. Are you allowed to replace the booking date and time per booking?
၇။ ထိုးနှံမည့် ပန်းလှိုင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး စင်တာအချိန်၊ နေရာ နှင့် နေ့ရက်များပြောင်းနိုင်ပါသလား?
Once the booking is confirmed, you can makeaone-time change while visiting the booking website by using the reschedule code included in the SMS you received.
Booking အတည်ပြုပြီးနောက် ရရှိမည့် စာတို SMS တွင် ပါဝင်သည့် reschedule code ကိုအသုံးပြု၍ Booking website တွင် တစ်ကြိမ် သွားရောက်ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
8. What do I have to bring to Pun Hlaing’s COVID-19 Vaccine Centres for inoculation process?
၈။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစင်တာသို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် သွားရောက်ရာတွင် မည်သည့်အချက်အလက်များ ယူဆောင်သွားရန် လိုအပ်ပါလဲ?
You must bring and present the Booking ID included in the SMS you received (or) bring the photo and identification card to the vaccine centres. When you arrive at Pun Hlaing COVID-19 Vaccine Centres, you need to fill an agreement form and information about the type of COVID-19 Vaccine you received before and the date and time.
ဖုန်းထဲရှိ Booking ID ပါသည့် SMS (သို့) ID ပါသည့် ဓာတ်ပုံ၊ မှတ်ပုံတင် ယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းလှိုင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစင်တာသို့ရောက်သော် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သဘောတူညီကြောင်း နှင့် ယခင်ဆေးထိုးခဲ့သည့်ဆေးအမျိုးအစား၊ နေ့ရက်များ သေချာစွာဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
9. What services include in the C-19 Vaccine 3rd Dose?
၉။ တတိယအကြိမ်ဆေးထိုးခြင်းအတွက် အခြားသောမည်သည့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်ပါသလဲ?
With your 3rd dose journey, Pun Hlaing providesacomplementary TeleHelath consultation with Family Practitioners within 48 hours from your booked schedule. You are welcome to secureaphysical consultation at COVID-19 Vaccine Centres if you are not okay to call within 48 hours.
Booking တင်သည့် နေ့ရက်မှ ၄၈ နာရီအတွင်း ပန်းလှိုင် TeleHealth ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုမှ ဖုန်းဆက်သွယ်ပြီး (အခမဲ့) ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးခွင့်ရပါမည်။ ၄၈ နာရီအတွင်း ဖုန်းမဆက်မီ လာရောက်ထိုးနှံသူများအတွက်မူ ကာကွယ်ဆေးစင်တာများတွင် ဆရာဝန်နှင့် တစ်ကြိမ် (အခမဲ့) ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
10. Are the first two doses considered ineffective upon inoculating the 3rd dose of C-19 Vaccine?
၁၀။ တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကြောင့် ယခင်က၂ ကြိမ်ထိုးနှံခဲ့သော ကာကွယ်ဆေးသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဟု ယူဆနိုင်ပါသလား?
The COVID-19 vaccine has been shown to reduce the risk of severe infections and infections. Hospitalisation; Mortality rates can be reduced and prevented. However, as immunity to the new Delta vaccine decreases,athird dose may increase the rate of protection.
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်သော ရောဂါကူးဆက်မှု၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်း၊ သေဆုံးမှုနှုန်းများကို လျှော့ချကာကွယ်နိုင်သည်။ သို့သော် မျိုးကွဲသစ် Delta အား ကာကွယ်နိုင်မှုစွမ်းအား လျှော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ကာကွယ်နိုင်မှုနှုန်းကို မြှင့်တက်စေနိုင်ပါသည်။
11. If you have been infected with COVID-19 after vaccination (2 doses), do you needa3rd Dose?
၁၁။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပါက တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သလား?
Our suggestion is to avoid 3rd Dose vaccination after being infected for6months.
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရပါက ၆ လအတွင်း တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
12. Do you need an antibody (Qualitative or Quantitative?) test to inoculate the 3rd Dose?
၁၂။ တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန် Antibody စစ်ဆေးခြင်း လိုအပ်ပါသလား?
An Antibody test is not mandatory for 3rd Dose. It is solely up to your preference.
တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအတွက် မထိုးမီနှင့် ထိုးပြီး Antibody စစ်ဆေးခြင်းသည် မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးရန်မလိုအပ်ပါ။ မိမိဆန္ဒသာဖြစ်ပါသည်။